Ngemuva kokucima isakhiwo se-martensite, ishubhu elikhanyayo elicwengekileyo lalinganiselwe ebangeni lokushisa elingu-450 ~ 600 ℃ .Okanye ku-650 ℃ ngemuva kokufuthelana ngesilinganiso esipholisa kancane ngemuva kuka-350 ~ 600 ℃; Noma ngemuva kokufuthelana ngo-650 ℃, ukufudumeza isikhathi eside ebangeni lokushisa elingu-350 ~ 650 ℃ lenza into eqondile yepayipi le-embrittlement. Uma i-embrittled 20 # precision steel pipe ifudunyezwa ibe ngu-650 ℃ bese ipholile masinyane, ingabuyisa ukuqina, ngakho-ke yaziwa nangokuthi% 26ldquo; Ukubuyisa intukuthelo brittleness% 26rdquo; Ubulukhuni bethempelesha ephezulu ubulukhuni bokunemba okucacile ithubhu kanye nokwanda kokushisa okuguqukayo kokushisa.ukushisa okuphezulu okushisa.ukuzwela ngokuvamile kuchazwa njengomehluko phakathi kwamazinga okushisa e-ductile kanye ne-brittle change (% 26Delta; T) ukusho.ukuphakama kobukhulu bokushisa okushisa kakhulu, kuyanda ingxenye ukwaphuka kwemisipha ekuhlukaneni kwesibhubhu esikhanyayo ngokunemba.
Umphumela wezinto kuthubhu ekhanyayo eqondile kubukhulu bokushisa obushisayo buhlukaniswe 1) izinto zokungcola ezifana ne-phosphorus, i-tin, i-antimony nokunye okubangela ukushisa okuphezulu okushisa kwe-tube ekhanyayo. (2) Izakhi ezihlanganisa izinto ezithuthukisa noma ezinciphisa izinga lokushisa eliphakeme lokushisa ngezindlela ezahlukahlukene nakumazinga ahlukene I-chromium, i-manganese, i-nickel, i-silicon njalonjalo idlala indima yokukhuthaza, kuyilapho i-molybdenum, i-tungsten, i-titanium njalonjalo idlala indima yokubambezeleka.i-Carbon nayo idlala indima ethile. Jikelele i-carbon precision tube ekhanyayo ekushiseni okuphezulu okushisa. Izinga lezinsimbi ze-alloy kanambambili noma ze-multicomponent alloy eziqukethe i-chromium, i-manganese, i-nickel ne-silicon yehlukile ngohlobo nokuqukethwe kwezinto ezixubayo.
Isimo sokulethwa kwempahla 5.Standard